प्रचण्ड–नेपाल पक्षले छान्यो ६५ जिल्ला नेतृत्व, कहाँ–को ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले छान्यो ६५ जिल्ला नेतृत्व, कहाँ–को ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले ६५ जिल्लाको नेतृत्व चयन गरेको छ ।
केन्द्रीय सचिवालयले ६५ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको हो । माघ १ र २ गतेको बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सचिवालयलाई सचिव र अध्यक्ष छान्न अधिकार दिएको थियो ।
बाँकी रहेका जिल्लामा प्रदेशका पदाधिकारीहरूले परामर्श गरेर यथाशीघ्र नाम सिफारिस गर्ने नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जनाएको छ ।
यसैगरी सो पक्षले काठमाडौैं, ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिकाको अध्यक्ष र सचिवको पनि टुंगो लगाएको छ ।
यसअघि प्रचण्ड–नेपाल समूहले पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको तर्फबाट ५०/५० प्रतिशतका आधारमा एकता टुंग्याउने र रिक्त ठाउँमा पदपुर्ती गर्ने ९ बुँदे मापदण्ड बनाएको थियो ।
ट्याग्स: नेकपा, प्रचण्ड–नेपाल पक्ष